ITIL ကဘာလဲ? ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလဲ? | ယင်း
အဆိုပါ ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ITIL (IT Infrastructure စာကြည့်တိုက်မူဘောင်) အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုများကိုထည့်သွင်းသမျှသောအိုင်တီဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ်စစ်ဆင်ရေး၏ခိုင်မာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဥပမာ, ရွေးချယ်မှု, စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဖန်ဆင်းခြင်း, ဖြန့်ဝေ, ထောက်ခံမှုများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ငါစီမံခန့်ခွဲမှု FOR သူတို့ကို access နှင့်လေ့လာမှအားကိုးနည်းစနစ်ကအောက်ပါတို့က, ဒေတာသည်၎င်း၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပုံဖော်တင်ဆက်များ၏စုရုံးခွင့်ပြုထားသည်။ ဒါဟာ unsurprising ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်ဆင့်ပြီးမြောက်ရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားမြှင့်တင်ရန်ကမ္ဘာ့အများဆုံးယေဘုယျအားအသုံးပြုသွားမည်အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုမူဘောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေတာအရင်းအမြစ်တွေကိုအဆဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်းကြောင့် data ကိုသတ္တုတူးဖော်ရေးနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏လယ်ပြင်တွင်ကျွမ်းကျင်သူများကကျုံ့နှင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုငြင်းလိုအပ်ချက်သို့လှည့်နေသည်။ ဒီမှာဖြစ်ပါတယ် ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးs ကိုဒေတာသုတေသီများသို့မဟုတ် data ကိုကျွမ်းကျင်သူများအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတက် setting အားဖြင့်မှုတ်သွင်းပညာရှင်များအနေနဲ့တာဝန်သင်တန်းသို့လှည့်နေကြပါတယ်။ တစ်ဦး ITIL အတည်ပြုချက်ကိုစာမေးပွဲဖြေဆိုဖြတ်သန်းသင်သည်သူတို့၏အရွယ်အစားနည်းနည်းသတိပေးဆောင်၎င်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ITIL ရဲ့ extensible သင်ယူမှုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အတည်ပြုချက်အသိအမှတ်ပြုလေးအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်တဲ့3ရက်ကြာစမ်းသပ်မှုသည်:
1.ITIL Foundation မှအဆငျ့ သော ITIL ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးအပ်ခြင်း (2 ခရက်ဒစ်) ၏ဝေါဟာရများနှင့်ချဉ်းကပ်မှုအပေါ် concentrates,
2. ITIL အလယ်အလတ်အဆင့်အထိ တဦးတည်းအပို module (15 ခရက်ဒစ်) နဲ့, တာဝန်ဝန်ဆောင်မှုဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်း module ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း, အရာထဲကသင်ကနှစ်ခု module တွေကောက်နိုင်ပြီး, အမျိုးမျိုးသောလိုသလိုလေ့ကျင့်ရေး module တွေပါဝင်ပါတယ်,
3.ITIL ကျွမ်းကျင်သူအဆင့် မြေတပြင်လုံး ITIL (22 ခရက်ဒစ်) နဲ့ဖော်ထုတ်သင်ယူမှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်စစ်ဆေး
4.ITIL ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆင့် ယင်း၏တစျခုလုံးကိုလက်တွေ့ကျကျသတင်းအချက်အလက်ဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် (အိုင်တီဒိုမိန်းအလုပ်ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏5နှစ်ပေါင်းထက်အဘယ်သူမျှမပိုဆောင်းခရက်ဒစ်သို့သော်အဘယ်သူမျှမနည်း) တို့ပါဝင်သည်။
* အဆိုပါခရက်ဒစ်တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်မှာထည့်သွင်းထားပါသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်အတိတ်ခရက်ဒစ်လာမယ့်အဆင့်ဆင့်မှာနေရာယူနေကြသည်။
၏ကုန်ကျစရိတ် ITIL အစီအစဉ်ကို အမျိုးမျိုးသောအဆင့်ဆင့်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများအဘို့ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဒါဟာထိုနည်းတူတစ်ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်၏ကာလ၏အရေအတွက်အပေါ်သို့မှီခိုနေရသည်။ by နဲ့ကြီးမားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်၏အသုံးအနှုန်းနှင့်အတူမတူသည့်အမေရိကန် $ 200, အမေရိကန် $ 1000 အကြားတည်ရှိသည်။ ITIL သင်တန်းအစီအစဉ်၏ဝေါဟာရကို2ရက်7ဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်တန်းစာအုပ်များ ITIL Foundation ကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ် Get ရန် Read ရန် - သင်သည်ဤအရပ်၌နိုင်တော့မည် checkout မယ်လို့
ဤတွင်ဦးချင်းစီအဆင့်များအတွက်သေဆုံးသူယူထင်မှတ်သော်လည်း, ဒါပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ပညာရေးများ၏စွမ်းရည်ကိုအဆင့်ဆင့်အပေါ်သို့ကဆက်ပြောပါတယ်, သူတို့ရဲ့ပြနည်းစနစ်များနှင့်စတင်ရန်အဖွဲ့အစည်းကနေပြောင်းလဲသွားစေခြင်းငှါ, မှတ်မိနေသည်။
ITIL ဖောင်ဒေးရှင်း (အနေနဲ့အသိအမှတ်ပြု Institution မှထံမှ) အမေရိကန် $ 205.00
ITIL ဖောင်ဒေးရှင်း (တိုက်ရိုက်) အမေရိကန် $ 226.00
ITIL အလယ်အလတ်အမေရိကန် $ 750.00
ITIL ကျွမ်းကျင်သူအမေရိကန် $ 750.00
ITIL Professional ကအမေရိကန် $ 4500.00
များအတွက်စျေးနှုန်းများ ITIL လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး သင်တန်းအမှတ်စဥ်သို့မဟုတ်စာမေးပွဲအချိန်နှင့်အတူပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အမှုကိုစာရင်းတွင် ITIL ချပြီးသငျသညျမွကွေီးပျေါဖို့သင့်ကိုဆင်းဖို့အိုင်တီဆက်စပ်တာဝန်ကျသည့်အိုင်တီဝန်ဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံလျှောက်ထားခြင်းအတွက်အခြေခံစံနှုန်းသတ်မှတ်ထားဖို့လိုအပျကွောငျးထိုအဖြစ်အပျက်အတွက်အမြတ်ပါပဲ။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကိုယ်ရေးရာဇဝင်တစ်လျောက်ပတ်တိုးချဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ITIL သင်တန်းနှင့်ကတိသစ္စာပြုနှင့်အတူတစ်ဦးကပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဟာ ITIL ဇာတ်စင်၏အသုံးချအပေါ်သူတို့ရဲ့သုို့ခေါ်၏ပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။
ITIL တစ်ဦးချင်းစီအိုင်တီစစ်ဆင်ရေးများအတွက်အစွမ်းထက်မူဘောင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါမှတ်မိအထောက်အထားအနေဖြင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, တိုး, ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ထောက်ခံမှုဖို့ကတိုးမြှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဆောက်အဦများပြီးမြောက်ဖို့ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အိုင်တီကြီးကြပ်ရေးမှူး, အကြံပေး, အမှုဆောင်အရာရှိ, စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်သူများကသို့မဟုတ်အိုင်တီ rehearses အကောင်းဆုံးနှင့်အတူစျေးကွက်ထိန်းချုပ်ဖို့သူတို့ကိုအာရုံစိုက်အစွန်းပေးခြင်းအားဖြင့်မဆိုဤကဲ့သို့သောဝန်ထမ်းအလုပ်၏သဘောသဘာဝတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက် - ITIL ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးအသင်းအဖွဲ့အနေဖြင့်အိုင်တီစီမံခန့်ခွဲမှုအချက်အလက်များ၏တစ်ဦးကြီးမားသောစာကြည့်တိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦး ITIL သင်တန်းပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်နှင့်အိုင်တီစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အကောင်းဆုံးနည်းစနစ်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အိုင်တီဟာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းတူရိယာပညာရှင်များကိုငါပေးမည်။
ITIL Foundation ကိုအသိမှတ်ပြုလက်မှတ် Get လုပ်နည်း